5G နဲ့ OLED Super Retina XDR မျက်နှာပြင်ပါတဲ့ iPhone 12 mini နဲ့ iPhone 12 ကို ကြေညာ – DigitalTimes
5G နဲ့ OLED Super Retina XDR မျက်နှာပြင်ပါတဲ့ iPhone 12 mini နဲ့ iPhone 12 ကို ကြေညာ
နောက်ဆုံးတော့ 5G iPhone တွေကို ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ iPhone 12 mini နဲ့ iPhone 12 မှာ OLED Super Retina XDR မျက်နှာပြင်ပါလာပြီး HDR နဲ့ Dolby Vision ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ Ceramic Shield Protection အသစ် ပါလာပြီး အောက်ပြုတ်ကျတဲ့ ဒဏ်ကို ၄ ဆလောက်ပို ခံနိုင်လာပါတယ်။ ရေအနက် ၆ မီတာမှာ မိနစ် ၃၀ အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်း ၂ လုံးစလုံးရဲ့ အနောက်ဘက် ပင်မ 12MP ကင်မရာက အရင်နှစ် iPhone ထက် Low-light စွမ်းရည်က ၂၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာစေသလို နောက်ထပ် 12MP မြင်ကွင်းကျယ် ကင်မရာ ၁ လုံး အပို ပါပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မှာ Face ID ထောက်ပံ့တဲ့ 12MP ကင်မရာ ၁ လုံးပါပါတယ်။ ကင်မရာ အားလုံးမှာ Night Mode အပြင် Night Mode Time-lapse လုပ်ဆောင်ချက် အသစ် ထည့်ထားပါတယ်။ Glass Back နဲ့ အလူမီနီယမ် ဒီဇိုင်း သုံးထားပါတယ်။ MagSafe Wireless Charging လုပ်ဆောင်ချက် အသစ် ထည့်သွင်းထားပြီး 15W နှုန်းနဲ့ အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘူးထဲမှာတော့ Charger မပါလာပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ Specs အပြည့်အစုံကို အောက်မှာ လေ့လာပါ။
•	iPhone 12 mini -5.4-inch (2340×1080 pixels) OLED 476ppi Super Retina XDR display, up to 1200 nits brightness, Ceramic Shield protection
•	iPhone 12 – 6.1-inch (2532×1170 pixels) OLED 460ppi Super Retina XDR display, up to 1200 nits brightness, HDR, Dolby Vision, Ceramic Shield protection
•	Six-Core A14 Bionic 5nm chip with 64-bit architecture, quad-core graphics
•	64GB, 128GB,256GB storage options
•	Water and dust resistant (IP68)
•	Dual SIM (nano + eSIM)
•	12MP wide-angle (f/1.6) camera, 7P lens, optical image stabilization, True Tone flash, 4K video recording at 60 fps, Slo mo 1080p at 240fps, 12MP 120° Ultra Wide (f/2.4) secondary camera, 5P lens
•	12MP TrueDepth front camera with f/2.2 aperture, Retina Flash, 4K video recording at 60 fps, Slo mo 1080p at 120fps
•	TrueDepth camera for FaceID facial recognition, Stereo speakers
•	iPhone 12 mini dimensions: 131.5×64.2×7.4mm; Weight: 133grams
•	iPhone 12 dimensions: 146.7×71.5×7.4mm; Weight: 162grams
•	5G (sub6GHz), Gigabit-class LTE, 802.11ax Wi Fi6with 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC with reader mode, GPS with GLONASS
•	Built-in rechargeable lithium-ion battery with MagSafe wireless charging, fast charging, up to 15 hours (iPhone 12 mini) / 17 hours (iPhone 12) of video playback
ဖုန်း ၂ လုံးစလုံးအတွက် အနက်၊ အပြာ၊ အနီ၊ အညိုနဲ့ အဖြူရောင်တွေ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
•	iPhone 12 mini 64GB – Rs. 69,900
•	iPhone 12 mini 128GB – Rs. 74,900
•	iPhone 12 mini 256GB – Rs. 84,900
•	iPhone 12 64GB – Rs. 79,900
•	iPhone 12 128GB – Rs. 84,900
•	iPhone 12 256GB – Rs. 94,900
တန်ဖိုးအနည်းဆုံး မော်ဒယ်အနေနဲ့ iPhone 12 mini 64GB ဟာ ၁၂ သိန်း ၄ သောင်းနဲ့ iPhone 12 64GB ဟာ ၁၄ သိန်း ၁ သောင်းလောက် အသီးသီး ကျသင့်မှာပါ။ အိန္ဒိယမှာ iPhone 12 ကို ၃၀ ရက်နေ့နဲ့ iPhone 12 mini ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ရောင်းမှာပါ။
စွမ်းရည် အမြင့်ဆုံး Redmi Note 10 မှာ 108MP ကင်မရာနဲ့ SD750G ပါမည်
5G နဲ့ OLED Super Retina XDR မျက်နှာပြင် ပါတဲ့ iPhone 12 Pro နဲ့ Pro Max ကို ကြေညာပြီ